Istaraatiijiyadda Ololaha & Maareynta - Kooxda Istaraatiijiyada Lincoln
Istaraatiijiyadda Ololaha &
Ololaha Caalamiga ah
Markaad horumarineysid istiraatiijiyad olole dal kale, xitaa qorshaha ugu dhameystiran & kan cajiibka ah wuxuu noqon karaa mid gebi ahaanba aan waxtar lahayn haddii aan la helin dadaal muuqda oo si dhab ah loogu fahmo dhaqanka maxalliga ah, deegaanka & xasaasiyadda.
Iyadoo la raacayo diiwaangelin la hubo oo ololayaal guul ah oo ka dhacda in ka badan dhowr iyo toban waddan oo ku yaal afarta qaaradood, kooxdeena waxay si gaar ah khibrad ugu leedahay inay ka caawiso ololahaaga caalamiga ah.
Waxaan si buuxda u fahamsanahay in waddan kasta, magaalo kasta & dhaqan kastaaba uu yahay mid si aan caadi ahayn u kala duwan - sidaa darteedna u baahan xalal aad u kala duwan oo xalal gaar ah loogu talagalay
Iyo, sababta oo ah kooxdeena caalamiga ah waxay ka shaqeysaa aagag waqtiyo badan leh, waxaas oo dhan waxaa hoosta laga xariiray awooddeena aan kugu siineyno adiga saacad kasta.
Ololaha Shirkadaha Shirkadaha
Ku dhowaad labaatan sano, Lincoln Strategy Group waxay la shaqeysay ganacsiyada yaryar & Fortune 100 shirkadaha si ay uga caawiso inay ka gudbaan caqabadaha sharciyeed iyo kuwa siyaasadeed ee adduunka oo dhan ka jira.
Si wada jir ah, kooxdeenu waxay leedahay wax kabadan qarni khibrad ololeed siyaasadeed oo ku baahsan adduunka oo dhan, oo ay kujirto shaqada dhammaan 50-ka Mareykanka.
Kooxda Istaraatiijiyadda ee Lincoln waxay ka ciyaareen doorar wax ku ool ah ololayaasha dhammaan heerarka dowladda.
Waxaan gacan ka geysanay ololeyaal dhowr ah oo Madaxweynaha Mareykanka ah, Senatarro, Guddoomiyeyaal Gobol, Maayarro iyo Xildhibaannada Golaha Magaalada. Xubnaha kooxdayadu waxay kaloo agaasimeen aaladaha waaweyn ee xisbiyada siyaasadeed iyo qaran.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan u diyaarinay istaraatiijiyado olole oo dhameystiran musharixiinta caalamiga ah & xisbiyada waaweyn ee siyaasadeed.
Tallaabooyinka Cod-bixinta & Waxqabadka
In ku dhow labaatan sano, Kooxda Istaraatiijiyadda Lincoln waxay u soo baxday hoggaamiye sare ee warshadaha tallaabooyinka cod-bixinta, dadaallada & aftida.
Lincoln waxay maamushay dhowr darsin ololeyaal codbixineed taasoo keentay in kabadan 7 MILLION saxiixyo la soo aruuriyay lana xaqiijiyay.
Tallaabooyinka codbixintu kaliya maahan inay siiyaan muwaadiniinta awood ay codkooda ku maqlaan siyaasadda deegaanka & gobolka; laakiin waxay u adeegaan qalab aad u awood badan (oo aan la ilaalin) oo loogu talagalay ururada la tacaalaya culaysyada sharciyeynta & arrimaha bulshada.
Inaad ku kalsoon tahay dadaallo badan oo cod-bixin ah sannad kasta, waxaannu ku dhex samaynay nidaam dhammaystiran oo lagu saxeexayo iyo ansixinta nidaamka gudahiisa Abe [Guji si aad waxbadan uga sii ogaato Abe]. Abe wuxuu u fidiyaa macaamiisheenna helitaanka natiijooyinka waqtiga-dhabta ah oo muujinaya tirada saxeexyada la soo ururiyay, sicirka ansaxnimada iyo jebinta juqraafi - iyadoo laga fogaanayo waqti lumis & kheyraad ku saabsan ururinta saxiixyada aan loo baahnayn.
Musharaxiinta & Arimaha U Qalma